सरकारको सय दिन : सामान्य गति, दर्जन् विसंगति — Bhaktapurpost.com
सरकारको सय दिन : सामान्य गति, दर्जन् विसंगति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिनमा सामान्य गति र एक दर्जन विसंगति देखिएको बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो मार्फत सरकारको १२ वटा विसंगति प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेसले पहिल्याएको १२ विसंगतिमा प्रधानमन्त्रीले देश, जनता र भगवानको नाममा सपथ नखाएको विषय उठाइएको छ । मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले भगवानको नाममा, देश र जनता कसैको नाममा पनि सपथ लिनु नपर्ने ? विसंगतिको सुरुवात यहीँबाट भयो’ शर्माले भनेका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभाका तीन जना सदस्य मनोनयनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्नुमा सरकारको मनोवैज्ञानिक दबाब र उत्प्रेरणा रहेको भन्दै शर्माले यसलाई पनि विसंगतिमा राखेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुलाई पनि कांग्रेसले सरकारको विसंगति भनेको छ । मुलुक संघीयतामा गएर शक्तिको विकेन्द्रिकरण भइरहेका बेला सरकारले महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने कांग्रेसले बताएको छ । ‘अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्मृतिमा नराख्नु विसंगतितर्फको तेस्रो कदम थियो यो सरकारको । कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई बार्गेनिङ चिप्सको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको, स्वेतपत्रमा नकारात्मक सूचकमात्र देखाएर ढुकुटी रित्तो छ भन्नुलाई पनि कांग्रेसले विसंगति भनेको छ ।
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नुलाई पनि सरकारको विसंगति भनेको छ । ‘के कुनै पनि मुलुकको सर्वोचच न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न मिल्छ ? १०० दिनसम्म न्यायाधीशको टुंगो हुन नसक्नु यो सरकारले न्यायालयलाई गरेको अन्याय हो’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन कार्यक्रम, ऐन कानुन, बजेट विनियोजन नगर्नु, राष्ट्रवादको विषयमा पनि सरकारको भूमिका विवादास्पद भएको भन्दै शर्माले त्यसलाई पनि विसंगति भनेका छन् । ‘चुनावमा जानुअगाडि उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्ने सरकारकाे नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई बिसर्जित गर्ने काम सरकारको अर्को विसंगित हो’ उनले भनेका छन् ।
कर्मचारीको मनोबल गिराउनु, कांग्रेस पार्टीलाई प्रतिपक्ष नै नदेख्नु, अत्यावश्यक सामानको मूल्यवृद्धि हुनु र नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षे कार्यक्रमहरु नआउनुलाई पनि कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले विसंगति भनेका छन् ।